Ogaden News Agency (ONA) – Astaanta Ugu Wayn Ee Lagu Garto Gumaystaha.
Astaanta Ugu Wayn Ee Lagu Garto Gumaystaha.
Posted by Daljir	/ July 10, 2017
Caadada gumaysiga iyo astaamihiisa wata ficilada iyo qorshaha lagu cabudgiyo umada si looga gaadho dano laga leeyahay oo gaara.
Gumaysigu ma helo awood iyo itaal maadi ah oo uu ku hanto umad leh dad, dal, dhaqan iyo aragti ay ku maareeyaan jiritaankooda sida dhaqaalaha, siyaasada, Xalinta khilaafaadka iyo kaydinta dhacdooyinka mara. (Taariikhda & Suugaanta) Balse marka gumaysigu gacanta ku dhigo qayb kamida ah dadka.uu salka dhigo qayb kamida dalka. uu fursad u helo inuu baro dadka dhaqankiisa ugu yaraan inay ka gartaan dhaqamada kale iyo in fulisa aragtida gumaysida. Taas marka uu soo taabto gumaystuhu waxaa qarxa oo cirka isku shareera diidmo qayaxan oo katimaada dadka leh Kalsoonida, geesinimada iyo mabda,a fog ee ku salaysan hanashada waxooda iyo la sinaanta shucuubaha dunida kale.
Markaas iyada ah waxaa aloosma loolan iyo isriix riix adag ilaa ay tagto gacan ka hadal.(Dagaal)
Hadab, goorma ayaa lagu dhawaaqi karaa gumaysi baa jira? Waa marka aad aragto ruux u dhimanaya umadax banaanaata aragtidiisa dad iyo dalba oo gacmaha ay hayaan kuwii ay isku danta ahaayeen islamarkaana uu jidhdilayo mid kamida umadiisa badal laguna dilayo aalo laga keenay wadankiisa dhexdiisa sida geed laga soojaray daaradiisa markaas waxaad qirikartaa inuu jiro gumaysi.
Laba marxaladood haduu dadku yahay gumaysi wuu ka madax banaan yahay.
1. Dad umadaxbanaan diin, dhaqan, dhaqaale iyo aragti
2. Dad isku raacsan oo diiday aragtida shisheeye
Sidaad waxaa lamida ruuxa aamina inaan lagumaysan karin dadkana uu la simanyahay kana dheerayn kana hoosaynin macnuhuna waa ku kalsoonaanta ruuxaadtahay markaana shaqsigu wuxuu leeyahay aragti madax banaan oo uu u badheedhay inuu cadaysto aduunkaba hakaga tagee.
Hadaba kaalintee ayuu kaga jiraa wadankaagu?